Podcast 9 × 15: Sameecadaha dhagaha iyo gabowga qorshaysan | Waxaan ka socdaa mac
Hal usbuuc ka badan kooxda iPhone News iyo aniga oo ka socda Mac ayaan la kulmay si aan uga hadalno wararka Apple. Munaasabaddan, maadaama aysan jirin mowduuc laga hadlayo, ugu yaraan muhiimadda, waxaan ku xisaabtannay kooxdii sameysay oo qaabeeysay sameecadaha dhagaha ee Dotts, sameecadaha dhagaha la galiyo oo qiimahoodu yahay 70 euro iyo kuwa sameeyey mid dib u eegis dhameystiran maalmo ka hor. Kooxda Dots-ka ayaa noo sharaxay sida ay ula yimaadeen fikradda ah samaynta samaacado cusub oo bilaa wireless ah inkasta oo imika ay ka buuxaan suuqa qalab noocan ah.
Laakiin, marka lagu daro, iyo waqtiga oo yar awgood, waxaan sidoo kale ka faallooneynaa wararka sheegaya in dhowr isticmaale ay xaqiijiyeen hoos u dhaca ku yimid waxqabadka iPhone-ka. Waxqabadka, taas oo marka loo eego tijaabooyinka kala duwan, ay xaqiijineyso inay hoos u dhacayso Markii ay kororto wareegyada wareegyada lacag bixinta bateriga.
Waxaa jiray dhowr isticmaale oo tijaabada ku sameeyay barnaamijka Geekbench, oo muujinaya sida ka hor intaanad beddelin batteriga, waxqabadka qalabku uu noogu deeqay ficil ahaan kalabar awoodda marka loo eego bateriga cusub. Sababta go’aanka Apple, ma ogin, laakiin waan fahamsanahay taas intaadan sidan ku dhaqaaqin, waa inaad kugula talisaa nidaamka inuu badalo batariga.
Khamiis walba kooxda labada bog waxay kulmaan si ay u tabiyaan Podcast-ka iyagoo si toos ah u sii wada kanaalkayaga TodoApple ee YouTube-ka, meeshaad karto si toos ah uga qaybgal su'aalo na weydiinaya ama ka faalloonaya waxaan dhahno. Haddii aadan rabin inaad seegto wax warbaahin ah, waad kicin kartaa ogeysiisyada App si aad u hesho ogeysiis mar kasta oo aan fiidiyoow u gelino kanaalkayaga ama aan bilowno tabinta tooska ah.
Laakiin haddii adiga adigu aad u raaxo badan tahay inaad na dhageysato iyada oo loo marayo barnaamijkaaga Podcast jecel yahay, kaliya waa inaad iska qortaa rwaxaad heleysaa ogeysiis mar kasta oo dhacdo cusub loo soo galiyo barnaamijka iTunes ee Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » 9 × 15 Podcast: Sameecadaha dhagaha iyo Maqal la'aanta Qorshaysan
Bilaabashada Feral Life waa Cajiib xilli ciyaareed dhameystiran
Apple Pay waxay sii wadaa ballaarinteeda bangiyada ku yaal Shiinaha, Mareykanka, Ireland iyo dalal kale